Iyo Apple Watch Chitoro haina kubudirira sekutarisirwa | Ndinobva mac
Nekusvika kwekutanga Apple WatchApple yakanyengedza chishandiso kwemwedzi isati yatanga kutengeswa. Yakashambadzirwa mumagazini yemafashoni, yakaratidzwa pamadhora evakakurumbira, uye yakaratidzwa pamapato evanhu vane mukurumbira kubva pasirese rekushambadzira uye fashoni.
Pakaiswa pakutengesa, haina kungotengeswa muApple Store neApple, kekutanga, yakagadzira zvitoro zvidiki umo maumbirwo akatengeswa pamusoro pezvose. Shanduro yechigadzirwa, icho sezvaunoziva, chakagadzirwa yero uye yakasimuka goridhe.
Zvakanaka, izvo zvatinofanira kukuudza nhasi ndezvekuti Apple inogona kunge ichifunga nezvekuvharwa kweaya madiki Apple Apple Chitoro zvitoro, zvinonzi Pop-up zvitoro panguva iyoyo, muna Ndira 2017. Chingave chiri chiitiko chinoita kuti tifunge kuti kutengesa Aya mawadhi ekumberi haanyatso kuburitsa bhizinesi rinodiwa neApple zvachose.
Zvikurukuru, chitoro icho chiri kuzovhara muFrance ndicho chitoro chidiki chakasarudzika chinotengesa iyo smartwatch muGaleries Lafayette, chitoro umo vashandi vanga vachidzikira pamusoro pemwedzi kusvika vasvika panhanho yekusadzoka nekuvharwa. Izvo zvakadzidzwa kuti vashandi vasara vanozoendeswa kune zvimwe zvitoro zveApple muParis.
Izvo zvakatanga neApple seprojekti inechido chakaramba chiri chishandiso chisingafadzi vateveri vazhinji veiyo brand uye kuti tichaona kana mamwe mauniti akatengeswa mune itsva Series 1 uye Series 2 shanduro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Zvitoro zveApple Watch hazvina kubudirira sezvanga zvichitarisirwa